Waa maxay sababta Farmaajo dhabarku loogu jeediyey | allsanaag
Waa maxay sababta Farmaajo dhabarku loogu jeediyey
Waa maxay Sababta Siyaasiyiinta Daarood ay uga aamusan yihiin Mooshinada Soomaaliya ka socda oo Hargaysa iyo Muqdisho hadda isu jiibinyaan .
Maalmahan Warbaahinta Soomaalida waxa ka hadlayey siyaasiyiinta beelaha Isaaq, Raxanweyn iyo Hawiye oo qaarkood ay u ololeenayaan, qaarkoodna diidan yihiin Mooshino iska soo horjeeda oo ka socda magaalada Muqdisho.
Iyada oo ay taasi jirto ayaa ilaa hadda waxaan ka hadlin warbaahinta oo aan cadayn mowqifkooda siyaasiyiinta beelaha Daarood iyo Hogaamiyaasha maamulada Jubbaland iyo Puntland.
Soomaalida oo dhexdoodu uu ka dhacay dagaal sokeeye oo aan weli ka heshiin oo qabyaaladdu ku weyn tahay dhexdooda ayaa xitaa Mahad salaad iyo Faysal Cali Waraabe oo hadda isugu jiibinaya sidii Caydiid iyo Siilaanyo ay isugu jiibinayeen 1991 ayaa siyaasiyiinta beeshaasi weli ka aamusan yihiin waxa ka socda caasimadda Soomaaliya iyo Villa Wardhiigleey
Hadaba waa maxay sababta ay Siyaasiyiinta Beeshaasi ay u aamusan yihiin?
Madaxweyne Farmaajo taageerayaashiisa siyaasadeed iyo la taliyashiisuba waa dad ku caan baxay nacayb beeleed iyo Cuqdad, qaarkood waa kuwii ku sheegay in Daaroodku Soomaaliya Ka yihiin Kurdistaan, qaarkood waxay ka qayb qaateen xasuuqii 1991, qaarkood waa federaal diid oo waxay ku caan baxeen inay dagaal joogto ah ku hayaan maamulada Jubbaland iyo Puntland. Inta dadka noocaas ah ay ku xeeran yihiin ama uu talo ku qaadanayo madaxweyne Farmaajo waa adag tahay in siyaasi ka soo jeeda Beesha Daarood uu ku dhiirado taageeridda madaxweyne Farmaajo.
Ugu danbayntii madaweyne Farmaajo waa hogaamiyaha dalka loo doortay inuu hogamiyo afarta san ee socota, waan mudan yahay in la taageero waa haddii uu isaguna wax ka bedelo habka hogaamintiisa oo uu kala garto ninka doonaya inuu guulaysto iyo midka doonaya inuu ku awrkacsado. Waxaaase hubaal ah in beesha Daarood qof, koox iyo beel toona ayna ka rari karin Soomaaliya hase ahaatee loo baahan yahay taageeradooda. Kooxda Cali yare iyo Fahad Yaasiin hogaaminayaana ayna meelna gaarsiin karin
← Imisay kuu heesayaan sidii Kacaankii Wadani Magaca Halla Iiga Hormariyo →